Ciidamada Itoobiya oo lawareegay Garoonka Diyaaradaha Kismaayo iyo cadaadis ay saareen Axmed Madoobe.
Monday July 29, 2019 - 12:29:39 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xilli xiisado dhanka siyaasadda ah ka jiraan magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose ayaa isbedel lagasoo sheegayaa mid kamida goobaha ugu muhiimsan magaalada.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dowladda Xabashida Itoobiya ay ciidamo dheeraad ah udaad guraysay magaalada Kismaayo si ay cadaadis siyaasadeed usaarto Axmed Madoobe oo ku magacaaban madaxweynaha maamulka Jubbaland.
Isbuucii lasoo dhaafay ayay dowladda Itoobiya ciidamo farabadan geysay magaalada kadib is faham ay lagashay saraakiisha melleteriga Kenya ee ku xooggan gobolka Jubbada Hoose.
Wararka ayaa intaas ku daraya in isbuucan gudihiisa ay Kismaayo gaareen tobaneeyo saraakiil Itoobiyaan ah kuwaas oo Axmed Madoobe ka dalbaday in uu cadaadiska ka joojiyo musharixiinta ka qeyb geli doono doorashooyinka soo socda.
Tallaabadan ay ciidamada Itoobiya kula wareegeen gacan ku heynta garoonka diyaaradaha Kismaayo ayaa DF usuurta gelinaysa in ay wufuud boorsooyin lacaga ah wada udiraan magaalada si ay loollan adag ula galaan Axmed Madoobe waxaana xusid mudan in ciidamada Kenya ay horay madaarka Kismaayo uga celiyeen siyaasiyiin ka yimid dhanka Muqdisho.
Dowladda Itoobiya ayaa doonaysa in ay saaxada siyaasadda ka saarto Axmed Madoobe ayna fursad siiso siyaasiyiinta geed fadhiga u ah Farmaajo iyo Kheyre ee Kismaayo ku sugan.
Ciidamada Itoobiya oo wata 28 gaari iyo hub culus ayaa lagu arkay gudaha iyo hareeraha Kismaayo, dad ku sugan Jubbada Hoose waxay sheegeen in Abiy Axmed oo ay isku dhowyihiin Farmaajo uu doonayo in Hoggaanka maamulka 'Jubbaland' uu qabto nin ay wadato dowladda Federaalka si lamid ah wixii ka dhacay Baydhabo horraantii sanadkaan kolkaas oo ciidanka Itoobiya ay xireen Mukhtaar Rooboow ayna kursiga maamulka Koonfur galbeed ay ku fadhiisiyeen nin ay wadato dowladda Farmaajo.